खुसी को खबर कतारमा अब कामदारको न्यूनतम तलब १८ सय रियाल
सुदुर दैनिक संवाददाता २०७७, १५ भाद्र सोमबार १३:५८ 275 जनाले पढ़िसके
कतारले श्रम कानूनमा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्दै श्रमिकको न्यनूतम तलब वृद्धि सहित रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । कतारले कानून नं १७, २०२० कार्यान्वयन गर्दै अब आप्रवासी कामदारले रोजगारदाताको अनुमति बेगर पनि रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । कतार सरकारको यो निर्णयलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले स्वागत गरेको छ ।
आइएलओले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न आफूले काम गरिरहेको रोजगारदाताको अनुमति चाहिने व्यवस्था खारेज तथा खाडी क्षेत्रमा नै भेदभावरहित न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ ।
कतारका श्रम मन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथमन फक्रहुले भने–“कतार आधानिक र समुन्नत श्रम बजार निर्माणका लागि प्रतिवद्ध छ । कतार भिजन २०३० लाई मध्यनजर गर्दा यो निर्णय महत्वपूर्ण हुने छ जहाँ श्रमिक, रोजगारदाता तथा कतारले लाभ प्राप्त गर्नेछ ।” सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ६ महिनाभित्रमा लागु हुने जनाइएको छ ।
अब कतारमा कार्यरत हरेक श्रमिकलाई आवासका लागि प्रतिमहिना ५ सय रियाल तथा खानाका लागि ३ सय रियाल थप दिनुपर्नेछ । यसले कतारमा खाना तथा आवाससहित न्यूनतम तलब १ हजार ८ सय रियाल हुनेछ । कतार पहिले देखिनै नेपाली कामदारहरुको आकर्षक थियो भने अब सरकारले न्युनतम तलब तोकेपछि अझ रोजगारीको आकर्षक गन्तब्य बन्नेछ ।
कतारमा करिब ३ लाख ५० हजार नेपाली कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये करिव ८० प्रतिशत नेपाली निर्माणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।
आदिम कलेज काठमाडौँले ल्यायो छात्रवृत्ति अफर
तत्काल कक्षा ११ को परीक्षा मिति सार्वजनिक नगर्न निर्देशन
सिन्धुपाल्चोक मा हिडडुल गर्दा मास्क नलगाए जरिवाना
शारिरीक सम्पर्क गर्दा–गर्दै युवतीको निधन, युवक पक्राउ
२ दिन भित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, फोटो छोई ॐ लेखि सेयर गरौं !!!
तपाईले सोचेको दुईदिनमा पुर्याउँछ छोएर ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस
बिल्कुलै बेवास्ता नगरी ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला तपाईको जीवनमा धनको बर्षा हुनेछ !
कृष्णपुरको वाणी हस्पिटलमा एक्सरे सेवा संचालनमा
विश्वकै सानो गाई,ॐ लेखेर शरे गर्नुहोला !!
NO एमसी’सी लेख्दै सक्दो शेयर गरौ : आज नेपालमा एमसी’सी पास गर्ने अन्तिम तयारी